Fooyyessa diinagdeerratti mari’atame – Fana Broadcasting Corporate
Fooyyessa diinagdeerratti mari’atame
Finfinnee, Hagayya 6,2011 (FBC) – Fooyyessa diinagdeerratti mariin Waajjirri Muummee Ministiraa Qopheesse har’a ganama gaggeeffameera.
Marichis ka’umsa riifoormii diinagdee fi kallattii isaarratti kan xiyyeeffatedha.
Mariisistuun gorsituu bulchiinsa hojii aadde Salaam Tashoomaati.
Haasaa kan taasisan ammoo gorsaa olaanaa ministira Ministeera Maallaqaa obbo Biruuk Taayyee, hundeessaa fi abbaa qabeenyaa Dhaabbata Gorsaa Invastimantii Luusii obbo Masaay Taaddasaa, hogganaa Daldala Voolkaaffee Liimiitid obbo Biruuk Fiqruuti.
Gorsaa olaanaan ministira Ministeera Maallaqaa obbo Biruuk Taayyeen fooyyessa diinagdee baatii 17tti raawwatame tarreessaniiru.
Qaala’iinsa gatii, hanqina sharafa alaa fi imaammata kaffaltii liqaa, akkasumas hojiilee namoota daldala keessa jiranii fi gara daldalaatti dhufaniif mootummaan rakkoolee jiran tartiiban hiikaa jiraachuu, dhaabbilee misoomaa mootummaa gariinii fi guutummaan dhuunfaaf dabarsuu ilaalchisees ibsa laataniiru.
Obbo Masaay Taaddasaan gama isaanitiin rakkoolee dhiyeessii faaynaansii fi hojiilee gaggaarii damichaan hojjetamaa jiran ilaalchisee yaada kaasaniiru.
Obbo Biruuk Fiqruun gama isaanitiin daldala alaarratti hojimaata idil addunyaarratti beekumsa qabaachuun murteessadha jedhan.
Qorannoon Ministeera Maallaqaa fi Dhaabbata Deeggarsa Daa’immanii ifoome
Obbo Ahimad Shiideen, daayreektara olaantuu Baankii Addunyaa waliin mari’atan
Sooreyyiin Jaappaan Ityoophiyaatti invast akka godhan waamichi dhiyaate